I-Wayback Burgers Inikeza Izipesheli Zenyanga Ende Yenyanga Kazwelonke Ye-Hamburger - Wayback Burgers
I-Wayback Burgers Inikezela ngezipesheli zeNyanga ende yeNyanga Kazwelonke ye-Hamburger
Yinyanga yethu esiyintandokazi onyakeni futhi - Inyanga Kazwelonke Ye-Hamburger! I- Wayback Burgers , ijoyinti eliyintandokazi yamabhega edolobha laseMelika kanye nelinye lama-burger franchise akhula ngokushesha esizweni, namuhla umemezele uchungechunge olumnandi lwezipesheli zokugubha Inyanga Kazwelonke Ye-Hamburger ngalo Meyi, enikeza kuphela amadili angcono kakhulu namnandi kakhulu ezivakashini zayo ezithandwayo.
Izivakashi zizokwazi ukuthola injabulo enkulu ngokuthenga ama-burgers kulo Meyi ngokuvakashela izindawo ze-Wayback Burgers ezweni lonke ngezipesheli zenyanga yonke. Inikezela ngedili elihlukile isonto ngalinye likaMeyi, umqondo wendawo yokudlela uqalisa Inyanga Kazwelonke Ye-Hamburger ngokuqinile ngamadili alandelayo okufanele aqedwe:
I-BOGO Classic Burger* - Meyi 1-2
Ukudla Kwezingane Kwamahhala** – Meyi 3-9
I-Bacon Regular Cheese Fries Yamahhala Ngokuthenga I-Burger noma I-Sandwich* * - May 10 - 16
$2 Isaphulelo Kuma-oda Ohlelo Lokusebenza** – Meyi 17 – 23
Izinsuku Zamaphuzu Amathathu Kuma-oda Ohlelo Lokusebenza** - Meyi 24 - 27; Meyi 29-31
Ukwengeza, ukugubha usuku olukhulu kakhulu lonyaka - Usuku Lukazwelonke Lwe-Hamburger ngoMeyi 28 - I-Wayback Burgers izonikeza zonke izivakashi amabhega azo ayisiginesha, okuhlanganisa ne-Cheeeesy Burger ethandwayo kanye ne-Double Bacon Burger, ngo-$3* kuphela. Izivakashi zikhuthazwa ukuthi zibambe iqhaza kulawa madili ngenkathi esekhona!
"Sijabule ukugubha ukubuya kweNyanga Kazwelonke Ye-Hamburger nezihambeli zethu ze-Wayback Burgers," kusho uPatrick Conlin, umongameli we-Wayback Burgers. “Ngamadili ahlukahlukene nezipesheli ezitholwa izivakashi inyanga yonke, sibheke ngabomvu ukwabelana namabhega ethu amnandi nezivakashi zethu kokubili endaweni yokudlela nangohlelo lwethu lokusebenza lwe-Wayback Burgers.”
I-Wayback Burgers inikezela ngezinhlobonhlobo zamabhega aphekwe ngoku-oda, amnandi atholakala njengephethi elilodwa noma ama-double patties akudala. I-"Cheeeesy" iyintandokazi yabalandeli futhi iza nezingcezu ezine zikashizi waseMelika oncibilikisiwe kanye namaqebelengwane amabili enyama yenkomo aphekwe ngoku-odwa, ahlanganiswe phakathi kwebhani ehlanekezelwe, eyosiwe futhi egayiwe ibhotela.
Njengoba "idlula" i-burger, i-Wayback Burgers iphinde inikeze ama-cheesesteaks, amasemishi enkukhu e-crispy nathosiwe, amasemishi ezinhlanzi, ama-veggie burgers, ama-Impossible Burgers, amathenda enkukhu, amasaladi amasha nezinhlangothi ezimnandi, okuhlanganisa amafrimu, izindandatho zika-anyanisi, i-mac kanye noshizi ukulunywa kanye nendlu. - ama-chips enziwe. Njengomphelelisi ophelele kunoma yikuphi ukudla, i-Wayback Burgers idume nangokucebile, ama-milkshake ayo acwiliswe ngesandla, aklanyelwe uku-oda ngo-ayisikhilimu nobisi lwe-Blue Bunny®.
Ngokusebenza ezifundazweni ezingu-31 (okuhlanganisa ne-Mississippi) kanye nezindawo zokudlela ezintsha eziqhubeka nokwandisa indawo yayo, i-Wayback Burgers inikeza izinto zemenyu ezimnandi nezithengekayo, ezihlinzekwa ngohlangothi lwempatho engeyinhle ezweni lonke. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe nge-Wayback Burgers, sicela uvakashele ku-www.WaybackBurgers.com , noma uvakashele amakhasi ethu okuxhumana nabantu ku- Facebook , Twitter noma ku- Instagram . Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nethuba le-Wayback Burgers lefranchise, vakashela ku- https://waybackburgers.com/franchising/ .